Kuzotholana phezulu izinkunzi zaseSoweto koweCarling Black Label | News24
Kuzotholana phezulu izinkunzi zaseSoweto koweCarling Black Label
ABADLALI abaningi be-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs bathi umqhudelwano we-Carling Black Label ubalulekile kakhulu ukutshengisa womabili amaqembu ukuthi aseyilungele yini isizini entsha.
Noma iningi labalandeli balamaqembu bake bezwakale bethi iVodacom Challenge endala yayingcono kuneCarling Black Label Cup ngoba yayiletha namakilabhu angaphandle kwaseMzansi futhi amaqembu ayeba mane.
IPirates neKaizer Chiefs bazobhekana ngaloMqgibelo eFNB Stadium.
Lomdlalo uthathwa njengobalulekile kakhulu futhi uma kuhlangene iBhakaBhaka neKhosi kuma yonke into futhi ukuthi indebe eyani akuchazi lutho ngoba abalandeli bafuna ukubona amaqembu enqobile. Okumnandi futhi ngalomqhudelwano ukuthi abalandeli baba negalelo ekukhetheni iqembu elizodlala.
Isethenjwa seBhakaBhaka esidlala emuva ngakwesokudla uHappy Jele uthe ngalempelasonto izinto zizoma nse eMzansi wonke.
UJele uthe kulukhuni ukuqagula ukuthi ngubani ozodla umhlanganiso kodwa naye akafuni ukuhlulwa yiKhosi. “Kuzoba umdlalo onzima. Thina siyawuthokozela lomqhudelwano ngoba usinika ithuba lokubona ukuthi sesiyilungele yini isizini ezayo,”kusho uJele.
Kulomqhudelwano iBhakaBhaka libukeka sengathi yilona elilandelwa yinhlanhla ngoba bakwazile ukuwina iminyaka emibili ilandelana, nokho-ke noma bagcine bewina sekushaywa amaphenathi. Kanti uKapteni weKhosi uSiphiwe Tshabalala uthe uma iqembu lakhe likwazile ukudla izitha zabo ngoMqgibelo kobe kuchaza lukhulu.
“Inkinga ukuthi akekho ofuna ukuhlulwa. Uma nje thina sikwazile ukunqanda iBhakaBhaka ngaphambi kokuqala kwesizini kuyochaza ukuthi umkhankaso wethu uzoba mnandi kulesizini,”kusho uTshabalala.
IKhosi kungenzeka likuthole kunzima ukushaya iPirates ngoba phela isiqeqeshwa uMuhsin Ertugral nowake waqeqesha eNaturena nowuqonda kahle umlando phakathi kwalamaqembu.